Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Ndira 17, 2018
Mutungamiriri webato rinopikisa reAlliance for People’s Agenda, Doctor Nkosana Moyo, vanoyambira vatsigiri vebato ravo kuti vasarudze vatungamiri vanokwanisa kuita zvido zvevanhu, uye vanozivikanwa nekugona kuita basa.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu, VaGastaff Kativu, vanoti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanofanirwa kusungwa votongwa nedare rinotonga mhosva dzinoparwa pasi rose reInternational Criminal Court, sezvo vakapara mhosva dzakawanda dzakavhiringa hupenyu hwevanhu vakawanda munyika.
Sangano reHeal Zimbabwe roshushikana nemashoko aIshe Fortune Charumbira avo vakabuda pachena kuti vanotsigira bato reZanu PF izvo sangano iri rinoti zvinozoita kuti vanhu vari pasi pemadzishe vasasununguke munyaya dzematongerwo enyika.
Vagari vekuMasvingo vononokerwa nemibatanidzwa yemapato iyo vanoti haisati yatanga kupinda muvanhu ichivaudza kuti zvinhu zvichafamba seyi musarudzo dzichaitwa munyika.
Sangano reZimbabwe Elections Support Network roita mangwana hurongwa hwekuzeya nyaya dzesarudzo muchirongwa chinenge chichikokerwa nemutori wenhau, Violet Gonda.
Hurumende yosangana nevemaindasitiri ichivakurudzira kuti vasakwidze mitengo yezvinhu, iyo inonzi neveruzhinji kukwira kwayo kwava kuita chamuramba mhuru.
Muchirongwa cheLiveTalk na 8pm, tiri kutarisa kodzero dzekuvhota dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.